GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
N’ỌTỤTỤ ebe n’ụwa, na December, a na-ahụkarị ihe ngosi nke nwa ọhụrụ bụ́ Jizọs ka nne ya bụ́ Meri na nna nkuchi ya bụ́ Josef na-elekọta ya n’ụzọ dị nro. Ihe ngosi dị otú ahụ nke ezinụlọ pụrụ ịdọrọ mmasị nke ọbụna ndị na-adịghị azọrọ na ha bụ Ndị Kraịst. Ebe Jizọs bụ onye bụ́ isi n’ihe ngosi a, gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị banyere ezinụlọ Jizọs n’ụwa?
Ezinụlọ Jizọs na-adọrọ nnọọ mmasị. Ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke aha ya bụ Meri mụrụ ya, ya esi otú ahụ ghọọ onye òtù nke ezinụlọ mmadụ. Dị ka Bible na-ekwu, e si n’eluigwe bufee ndụ ya n’akpa nwa Meri site n’ike mmụọ nsọ. (Luk 1:30-35) Tupu a maa ọkwa ntụrụ ime Jizọs n’ụzọ ọrụ ebube, Meri na nwoke aha ya bụ Josef ekwewo onwe ha nkwa ọlụlụ, bụ́ onye ga-esi otú ahụ ghọọ nna nkuchi Jizọs.
Mgbe a mụsịrị Jizọs, Josef na Meri mụrụ ụmụ ndị ọzọ, ndị nne ji ha na Jizọs. Nke ahụ pụtara ìhè n’ajụjụ ndị Nazaret mesịrị jụọ banyere Jizọs: “Onye a ọ́ bụghị nwa ọkwá nkà ahụ? Ọ́ bụghị nne ya ka a na-akpọ Meri, ọ̀ bụkwa na ụmụnne ya ndị ikom abụghị Jems na Josef na Saịmọn na Judas? Ụmụnne ya ndị inyom kwa, ọ̀ bụ na anyị na ha nile anọghị?” (Matiu 1:25; 13:55, 56; Mak 6:3) Anyị pụrụ ikwubi site na nke a na ihe mejupụtara ezinụlọ Jizọs bụ nne na nna ya, ụmụnne ya ndị ikom anọ, na ma ọ dịkarịa ala ụmụnne ya ndị inyom abụọ.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị taa ekweghị na ụmụnne ndị ikom na ndị inyom nke Jizọs bụ ụmụ Josef na Meri. N’ihi gịnị? “Chọọchị a,” ka New Catholic Encyclopedia na-ekwu, “site ná mmalite ya kụziri na Meri nọgidere bụrụ nwanyị na-amaghị nwoke. Ya mere, n’ihi nke a, ihe ịrụ ụka adịghị ya na Meri amụghị ụmụ ọzọ.” Otu akwụkwọ ahụ na-ekwu na okwu ahụ bụ́ “nwanne nwoke” na “nwanne nwanyị” pụrụ izo aka ‘n’onye ma ọ bụ ndị okpukpe ma ọ bụ ihe ọzọ jikọrọ’ ma ọ bụ ndị ikwu, ikekwe ụmụ nwanne nne ma ọ bụ ụmụ nwanne nna mmadụ.
Ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị n’ezie? Ọbụna ụfọdụ ndị nkà mmụta okpukpe Katọlik, n’ịgbagha ozizi ha ndị si n’aka fere n’aka, na-akwado echiche bụ́ na Jizọs nwere ụmụnne ndị ikom na ndị inyom ndị nne ji ha na ya. John P. Meier, onye bụ́bu president nke Catholic Bible Association of America, dere, sị: “N’A[gba] Ọ[hụrụ], adelphos [nwanne], mgbe a na-ejighị ya mee ihe nanị n’ụzọ ihe atụ kama n’ụzọ na-apụta mmekọrịta n’ụzọ anụ ahụ́ ma ọ bụ n’ụzọ iwu, adịghị ihe ọzọ ọ na-apụta ma ọ́ bụghị onye nne ji ya na mmadụ.” * Ee, Akwụkwọ Nsọ na-egosi na Jizọs nwere ụmụnne ndị ikom na ndị inyom bụ́ ndị Josef na Meri mụrụ.
Oziọma ndị ahụ kpọtụrụ ndị ikwu ndị ọzọ nke Jizọs aha, ma ka anyị lekwasị anya ugbu a n’ezinụlọ Jizọs ma hụ ihe ndị anyị pụrụ ịmụta n’aka ha.
^ par. 6 “Ụmụnne Jizọs dị ka Chọọchị Dị Iche Iche Si Ele Ha Anya,” nke J. P. Meier dere, The Catholic Biblical Quarterly, January 1992, peeji nke 21.